हाछ्छयु गर्दा यस्ता कुरा ख्याल गर्नुस् नत्र ज्यान जाला ! | Rajmarga
हाछ्छयु गर्दा यस्ता कुरा ख्याल गर्नुस् नत्र ज्यान जाला !
के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ, हाछ्छयु रोक्ने कोशिस तपाईका लागि ज्यानमारा सावित हुन सक्दछ ? डाक्टरहरुले चेतावनी दिएका छन् कि जब तपाईलाई हाछ्छयु आउँछ र तपाई त्यसलाई रोक्नका लागि यदि नाक र मुख बन्द गर्नुहुन्छ भने त्यसको गम्भीर परिणाम आउन सक्छ ।
इंग्ल्याण्डको लेस्टर सहरमा ३४ वर्षीय एक जना व्यक्तिको उपचारका क्रममा यो थाहा भयो कि हाछ्छयु रोक्ने कोशिसका कारण उसको गलाको कोशिका फुटेको थियो । साइन्स जर्नल बीएमजे केस रिपोर्टमा डाक्टरहरुले बताएका छन् कि जब हाछ्छयु रोक्ने कोशिस गरिन्छ तब यसबाट तपाईको कानलाई हानी पुग्न सक्दछ, यहाँसम्म कि दिमागका नशा पनि फुट्न सक्दछ।
३४ वर्षीय पीडितका अनुसार जब उसलाई यस्तो भयो तब उनलाई लाग्यो कि जसै उसको गर्धनमा केही फुट्यो । त्यसलगत्तै उनको गर्दनमा तिब्र पीडा महशुस भयो, केही पनि निल्न समस्या आउन लाग्यो र यहाँसम्म कि उनलाई बोल्न पनि कठिन भइरहेको थियो । जब डाक्टरले उनलाई चेक गरे तब थाहा भयो कि गला वरपर गर्दनमा सुजन थियो ।
क्षतिबाट बच्नका लागि….
एक्स रेबाट थाहा भयो कि हाछ्छयु रोक्ने कोशिसको चक्करमा दबावबाट श्वासनलीको कोशिकाहरु फुटेका थिए । गला सही नहुँदा सम्म उक्त व्यक्तिलाई एक सातासम्म एउटा ट्युबको सहयोगमा खाना खानुपर्ने भयो । अस्पतालमा एक साता बिताएपछि र पूरा ठिक भएपछि उक्त व्यक्तिलाई घर पठाइएको छ।
लेस्टर रोयल इन्फर्मरी (जहाँ व्यक्तिको उपचार गरिएको थियो) का ईएनटी (कान, नाक, घाँटी) विभागका डाक्टरले भने–नाक र मुख बन्द गरेर हाछ्छयु गर्नु खतरनाक हुन सक्दछ, यसबाट बच्नु जरुरी छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार हाछ्छयुबाट रोगहरु फैलन सक्छ । तर कुनै पनि प्रकारको क्षतिबाट बच्नका लागि त्यसलाई बाहिर निस्कन दिनु नै उचित हुनेछ । जब चारैतिर फ्लु फैलिएको थियो तब पब्लिक हेल्थ इंग्ल्याण्डको तर्फबाट मानिसहरुलाई प्रोत्साहित गरिएको थियो कि खोक्दा वा हाछ्छयु गर्ने बेला बच्चा र ठुला सबैले रुमाल वा कपडाले मुख ढाक्नु पर्दछ ।
त्यसपछि प्रयोग गरिको रुपमाललाई फोहोरमा फ्याँक्नु जरुरी छ। र, आफ्नो हातलाई धोएर किटाणुमुक्त बनाउनु आवश्यक छ। एजेन्सी
Previous post: शिक्षण अस्पतालमा राजीनामा दिई विदेश जाने नर्सको संख्या बढ्दो
Next post: एनआरएनए अध्यक्ष भट्टद्धारा अनाथ बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग